Maungtintyin: July 2010
ကေသမုတ္တိသုတ်တော် တနည်းအားဖြင့် ကာလာမသုတ်တော်လာ လူအများ စိတ်ဝင်စားသော ချက်ချင်းလက်ခံ အတည်မပြုသင့်သောအချက် ၁၀-ချက်ကို ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ များနှင့် ထင်ရှားသောဆရာတော်များ၏ ဘာသာပြန်များအား အစဉ်အတိုင်း ဖော်ပြသွားပါမည်။ မှတ်ချက်။ ။ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများအား နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၊ သုတ္တန္တပိဋကဌာန၊ ဌာနမှုး(ငြိမ်း) ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုစိတ္တ ( ဒီဃ ဘာဏက၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ မဟာဓမ္မာစရိယ M.A ၊ ပိဋကတ္တယပါရဂူ)မှ နိဿယ ပြန်ဆိုတော်မူသည်။
(၁) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော ပထမအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ အနုဿဝေန။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ အနုဿဝေနာတိ အနုဿဝကထာယပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ မာ အနုဿဝေနာတိ အာဒီသု ပန ဧကော ဒဟရကာလတော ပဋ္ဌာယ ဧ၀ံ အနုဿဝေါ အတ္ထိ။ ဧ၀ံ စိရကာလကတာယ အနုဿတိယာ လဗ္ဘမာနံ ကထမိဒံ အညထာ သိယာ။ တသ္မာ ဘူတမေတန္တိ အနုဿဝေန ဂဏှာတိ။ တထာ ဂဟဏံ ပဋိက္ခိပန္တော “မာ အနုဿဝေနာ”တိ အာဟ။ အနု အနု သ၀နံ အနုဿဝေါ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ အနုဿဝေနာတိ - မာ အနုဿဝေန ဟူသည်ကား၊ အနုဿဝကထာယပိ - ကလေး ဘ၀မှစ၍ အဆင့်ဆင့်ကြားရသော စကားမျှဖြင့်လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ ပန - အဖို့တစ်ပါးကား၊ မာ အနုဿဝေနာတိ အာဒီသု - မာ အနုဿဝေန အစရှိသော စကားရပ်တို့၌၊ အ၀ယ၀တ္ထော - အစိတ်စိတ်ဖြစ်သောအနက်ကို၊ ဧ၀ံ - ဤသို့၊ ဝေဒိတဗ္ဗော - သိထိုက်၏။ ဧကော - တစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ဒဟရကာလတော - ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှ၊ ပဋ္ဌာယ - စ၍၊ ဧ၀ံ - ဤသို့၊ အနုဿဝေါ - အဆင့်ဆင့်ကြားရခြင်းသည်၊ အတ္ထိ - ရှိ၏။ ဧ၀ံ - ဤသို့၊ စိရကာလကတာယ - ကြာမြင့်စွာ သောကာလ၌ ပြုအပ်သော၊ အနုဿတိယာ - အဖန်ဖန်အောက်မေ့ အမှတ်ရခြင်းဖြင့်၊ လဗ္ဘမာနံ - ရအပ်သော၊ ဣဒံ - ဤစကားသည်၊ ကထံ - အဘယ်သို့လျင်၊ အညထာ - တစ်ပါးသောအခြင်းအရာအားဖြင့်၊ သိယာ - ဖြစ်ရာအံ့နည်း။ တသ္မာ - ထို့ကြောင့်၊ ဧတံ - ဤစကားသည်၊ ဘူတံ - ဟုတ်မှန်၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ အနုဿဝေန - ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှ အဆင့်ဆင့်ကြားခြင်းဖြင့်၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တထာ - ထိုသို့သော အခြင်းအရာအားဖြင့်၊ ဂဟဏံ - ယူခြင်းကို၊ ပဋိက္ခိပန္တော - ပယ်မြစ်တော်မူလိုသော (၀ါ) ပယ်မြစ်တော်မူလို သည်၏အဖြစ်ကြောင့်၊ “မာ အနုဿဝေနာ”တိ - မာ အနုဿဝေနဟူ၍၊ ဘဂ၀ါ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ အာဟ - မိန့်တော်မူ၏။ အနု အနု - အဆင့်ဆင့်၊ သ၀နံ - ကြားခြင်း၊ အနုဿဝေါ - အဆင့်ဆင့်ကြားခြင်း။
(၁) ကလေးဘ၀မှစ၍ အဆင့်ဆင့်ကြားရသော စကားမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) ပြောသံကြားကာမျှဖြင့် ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) ကလေးဘ၀မှစ၍ ကြားနာမှတ်သားခဲ့ရခြင်းဖြင့်လည်း ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟု အစွဲအမြဲ မယူကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) အဆင့်ဆင့်ပြောစကား ကြားရုံမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်လှပြီဟု အတည်အမြဲ စွဲမှတ်မထားကြကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) သူတစ်ပါး၏အထံမှ အဖန်တလဲလဲ ကြားသောစကားဖြင့် မယူကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော်နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything on (mere) hearsay – (i.e. thinking that thus have we heard it fromalong time.) Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) Do not be led by reports. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) Do not go by oral tradition. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၂) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော ဒုတိယအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ ပရမ္ပရာယ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ပရမ္ပရာယာတိ ပရမ္ပရ ကထာယပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ အပရော ‘အမှာကံ ပိတုပိတာ မဟာဝုဒ္ဓါနံ ဥပဒေသ ပရမ္ပရာယ ဣဒမာဘတံ။ ဧ၀ံ ပရမ္ပရာဘတံ ကထံနာမ န အညထာ သိယာ တသ္မာ ဘူတမေတန္တိ ဂဏှာတိ၊ တံ ပဋိက္ခိပန္တော ‘မာ ပရမ္ပရာယာ’တိ အာဟ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ပရမ္ပရာယာတိ - မာ ပရမ္ပရာယဟူသည်ကား၊ မာ ပရမ္ပရကထာယပိ - မိဘဘိုးဘွား အစရှိသည်တို့ သတ်မှတ်ခဲ့သော ဥပဒေသအဆက်ဆက်စကားများမျှဖြင့်လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ အပရော - တစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ အမှာကံ - ငါတို့၏၊ ပိတုပိတာမဟာဝုဒ္ဓါနံ - အဘအဘိုး အစရှိသောအားဖြင့် ကြီးကုန်သောသူတို့၏၊ ဥပဒေသ ပရမ္ပရာယ - ဥပဒေအဆက်ဆက်အားဖြင့်၊ ဣဒံ - ဤစကားကို၊ အာဘတံ - ဆောင်အပ်၏။ ဧ၀ံ - ဤသို့၊ ပရမ္ပရာဘတံ - အဘ အဘိုး အစရှိကုန်သော ကြီးကုန်သောသူတို့၏ ဥပဒေသအဆက်ဆက်အားဖြင့် ဆောင်အပ်သော၊ ကထံနာမ - စကားမည်သည်၊ အညထာ - တစ်ပါးသောအခြင်းအရာအားဖြင့်၊ န သိယာ - မဖြစ်ရာ။ တသ္မာ - ထို့ကြောင့်၊ ဧတံ - ဤစကားသည်၊ ဘူတံ - ဟုတ်မှန်၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တံ - ထိုသို့ယူခြင်းကို၊ ပဋိက္ခိပန္တော - ပယ်မြစ်တော်မူလိုသော၊ ၀ါ- ပယ်မြစ်တော်မူလိုသည်၏အဖြစ်ကြောင့်၊ ‘မာ ပရမ္ပရာယာ’တိ - မာ ပရမ္ပရာယ ဟူ၍၊ ဘဂ၀ါ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ အာဟ - မိန့်တော်မူ၏။
(၁) မိဘဘိုးဘွားစသော ကြီးကုန်သောသူတို့၏ အစဉ်အဆက် သတ်မှတ်သယ်ဆောင်ခဲ့သော ဥပဒေသနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟူ၍လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) အစဉ်အဆက်စကားမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) မိဘဘိုးဘွား စသည်တို့မှ ဆင်းသက်၍ (ပရံပရ = အဆက်ဆက်) မှတ်ယူလုပ်ကိုင်ရိုးဖြစ်၍လည်း အစွဲအမြဲ မယူထားကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) မိဘဘိုးဘွား အဆက်ဆက်ပြောစကားဖြင့်လည်း ဟုတ်လှပြီဟု အတည်အမြဲ စွဲမှတ်မထားကြကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) ဆွေမျိုးတို့၏အဆက်ဆက်မှလာသော စကားဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything on mere tradition. – (i.e. thinking that it has thus been handed down through many generations.) Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) or tradition. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by lineage of teaching. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၃) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော တတိယအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ ဣတိ ကိရာယ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ဣတိ ကိရာယာ’တိ ဧ၀ံ ကိရ ဧတန္တိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ ဧကော ကေနစိ ကိသ္မိဉ္စိ ၀ုတ္တမတ္ထေ ‘ဧ၀ံ ကိရ ဧတ ’ န္တိ ဂဏှာတိ၊ တံ နိသေဓေန္တော ‘မာ ဣတိ ကိရာယာ’တိ အာဟ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ဣတိ ကိရာယာ’တိ - မာ ဣတိ ကိရာယ-ဟူသည်ကား၊ ဧတံ - ဤစကားသည်၊ ဧ၀ံကိရ - ဤသို့ဖြစ်ဖူးသတတ်၊ ဣတိ - ဤသို့၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ ဧကော - တစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ကေနစိ - တစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ကိသ္မိဉ္စိ - တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာကို၊ ၀ုတ္တမတ္တေ - ပြောဆိုကာမျှဖြစ်လတ်သော်၊ ဧတံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ ဧ၀ံကိရ - ဤသို့ဖြစ်ဖူးသတတ်၊ ဣတိ - ဤသို့၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တံ - ထိုသို့ ယူခြင်းကို၊ နိသေဓေန္ဓော - တားမြစ်တော်မူလိုသော၊ ၀ါ- တားမြစ်တော်မူလိုသည်၏အဖြစ်ကြောင့်၊ မာ ဣတိ ကိရာယာ’တိ - မာ ဣတိ ကိရာယဟူ၍၊ ဘဂ၀ါ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ အာဟ - မိန့်တော်မူ၏။
(၁) ဤသို့ဖြစ်ဖူးသတတ်ဟူသော စကားမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) ဤသို့ဖြစ်ဖူးသတတ်ဟူသော စကားမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) “ဒီဟာက ဒီလိုတဲ့” ဟု အခြားတစ်ယောက် ပြောလိုက်ရုံမျှဖြင့်လည်း အမြဲအစွဲ မှတ်ယူ မယူထားကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) အဲဒါ ဒီလိုတဲ့ဟု မသေမချာ ပြောစကားဖြင့်လည်း ဟုတ်လှပြီဟု အတည်အမြဲ စွဲမှတ်မထားကြကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) ဤသို့ဖြစ်သတတ်ဟူသော အခြင်းအရာအားဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything on account of mere rumour. – (i.e. by believing what other say without any investigation.) Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) or hearsay. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by hearsay. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၄) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော စတုတ္ထအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေန။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေနာတိ အမှာကံ ပိဋကတန္တိယာ သဒ္ဓိံသမေတီတိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ ပိဋကံ ဂန္ထော သမ္ပဒီယတီတိ ဧတဿာတိ ပိဋကသမ္ပဒါနံ။ ဂန္ထဿ ဥဂ္ဂဏှနကော။ တေန ပိဋက ဥဂ္ဂဏှကဘာဝေန ဧကစ္စော တာဒိသံ ဂန္ထံ ပဂုဏံ ကတွာ တေန တံ သမေန္တံ သမေတိ။ တသ္မာ “ဘူတမေတန္တိ” ဂဏှာတိ။ တံ သန္ဓာယေသ ပဋိက္ခေပေါ “မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေနာ”တိ။ အတ္တနော ဥဂ္ဂဟဂန္ထ သမ္ပတ္တိယာ မာ ဂဏှိတ္ထာတိ ၀ုတ္တံ ဟောတိ။ “သမေတ”န္တိ သံဂတံ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေနာတိ - မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေန ဟူသည်ကား၊ အမှာကံ - ငါတို့၏။ ပိဋကတန္တိယာ - ပိဋကပါဠိတော်နှင့်၊ သဒ္ဓိံ- အတူတကွ၊ သမေတိ - ညီညွတ်ပေ၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ ဧတဿ - ဤပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ပိဋကံ ဂန္ထော - ပိဋကကျမ်းစာသည်၊ သမ္ပဒီယတိ - ပြည့်စုံ၏။ ဣတိတသ္မာ - ထို့ကြောင့်၊ ပိဋကသမ္ပဒါနံ - ပိဋကသမ္ပဒါန-မည်၏။ ဂန္ထဿ - ကျမ်းစာကို၊ ဥဂ္ဂဏှနကော - သင်ယူတတ်သောသူတည်း။ တေန ပိဋက ဥဂ္ဂဏှကဘာဝေန - ထိုသို့ ပိဋကကို သင်ယူတတ်သည်၏အဖြစ်ဖြင့်၊ ဧကစ္စော - အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ တာဒိသံ - ထိုကဲ့သို့ရှု့အပ်သော သဘောရှိသော၊ ဂန္ထံ - ကျမ်းစာကို၊ ပဂုဏံ - လေ့ကျက်သည်ကို၊ ကတွာ - ပြု၍၊ တေန - ထိုကျမ်းဂန်နှင့်၊ တံ - ထိုပြောဆိုလာသော အကြောင်းအရာသည်၊ သမေန္တံ - တူမျှသည်ရှိသော်၊ ၀ါ-ကောင်းစွာရောက်သည်ရှိသော်၊ သမေတိ - ညီညွတ်၏။ တသ္မာ - ထို့ကြောင့်၊ ဧတံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ ဘူတံ - ဟုတ်မှန်၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တံ - ထိုသို့သောယူခြင်းကို၊ သန္ဓာယ - ရည်ရွယ်၍၊ “မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေနာ”တိ - မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေန-ဟူ၍၊ ဧသ- ဧသော ပဋိက္ခေပေါ - ဤပစ်ပယ်ခြင်းကို၊ ဘဂ၀တာ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ ၀ုတ္တော - ဟောတော်မူအပ်ပြီ။ အတ္တနော - မိမိ၏။ ဥဂ္ဂဟဂန္ထ သမ္ပတ္တိယာ - သင်ယူအပ်သောကျမ်းဂန်၏ ပြည့်စုံခြင်းမျှဖြင့်၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - အတည်မယူကုန်လင့်။ ဣတိ - ဤသို့၊ ၀ုတ္တံ - ဆိုအပ်သည်၊ ဟောတိ - ဖြစ်၏။ သမေတန္တိ - သမေတံဟူသည်ကား၊ သံဂတံ - ကောင်းစွာရောက်၏။
(၁) မိမိသင်ယူထားသော ပိဋကတ်ကျမ်းဂန်နှင့် ညီညွတ်ပြည့်စုံပေသည်ဟုလည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) ပိဋကတ်စာပေနှင့်ညီညွတ်ပေသည်ဟူ၍လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) “ဒီအယူအဆဟာ ငါတို့ သင်အပ်သောကျမ်းစာနှင့်ညီတယ်” ဟု မိမိတို့ ကျမ်းစာနှင့်ညီနေရုံမျှဖြင့်လည်း အတည်တကျ မှတ်ယူမထားကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) ကျမ်းဂန်ကို သင်ပြပေးရာ ပုဂ္ဂိုလ်၏အဖြစ်အားဖြင့်လည်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကျမ်းဂန်ကို သင်ယူထားသော ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေအားဖြင့်လည်း၊ မိမိတို့ကျမ်းဂန်နှင့်ကိုက်ညီ၏ဟု အတည်အမြဲ စွဲမှတ်မထားကြကုန်လင့်။ ဤစကား ဤအယူဝါဒသည် ငါတို့ သင်ယူထားသော ကျမ်းဂန်နှင့်ကိုက်ညီသည်ဟု အတည်အမြဲ စွဲမှတ်မထားကြကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) သင်အပ်သောကျမ်းဂန်ပါဠိကို ပြည့်စုံစေသဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything just because it accords with your scriptures. Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) Be not led by the authority of religious texts. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by collection on scriptures. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၅) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော ပဉ္စမအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ တက္ကဟေတု။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ တက္ကဟေတူတိ တက္ကဂ္ဂါဟေနပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ ကောစိ ကဉ္စိ ၀ိတက္ကန္တော ‘ဧ၀မေ၀ တေန ဘ၀ိတဗ္ဗ’ န္တိ ကေ၀လံ အတ္တနော သင်္ကပ္ပ၀သေန ‘ဘူတမိဒ’ န္တိ ဂဏှာတိ။ တံ သန္ဓာယေတံ ၀ုတ္တံ ‘တက္ကဟေတူ’တိ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ တက္ကဟေတူတိ -မာ တက္ကဟေတု - ဟူသည်ကား၊ တက္ကဂ္ဂါဟေနပိ - မိမိကြံစည်စဉ်းစားသော အကြံအစည်ကို ယူခြင်းဖြင့်လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ ကောစိ - တစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ကဉ္စိ - တစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကို၊ ၀ိတက္ကန္တော - ကြံစည်သည်ရှိသော်၊ တေန - ထိုအကြောင်းအရာသည်၊ ဧ၀မေ၀ - ဤသို့သာလျင်၊ ဘ၀ိတဗ္ဗံ - ဖြစ်ထိုက်၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ ကေ၀လံ - နယဟေတု, အကာရပရိဝိတက္က - တို့နှင့် မရောမယှက်သက်သက်၊ အတ္တနော - မိမိ၏၊ သင်္ကပ္ပ၀သေန - အကြံ၏အစွမ်းဖြင့်၊ ဣဒံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ ဘူတံ - ဟုတ်မှန်၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တံ -ထိုသို့သောယူခြင်းကို၊ သန္ဓာယ - ရည်ရွယ်၍၊ ဧတံ ‘တက္ကဟေတူ’ တိ ၀စနံ - တက္ကဟေတုဟူသော ဤစကားကို၊ ဘဂ၀ါ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ ၀ုတ္တံ - မိန့်တော်မူအပ်၏။
(၁) မိမိကိုယ်တိုင် ကြံဆတွေးတော၍ ယူခြင်းမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) ကြံဆတွေးတော၍ ယူခြင်းမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) မိမိဘာသာ ကြံစည်အပ်သော အရာကိုလည်း ဟုတ်လှပြီမှန်လှပြီဟု အစွဲအမြဲ ယူမထားကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) ဤအတိုင်းသာ ဖြစ်လောက်ရာ၏ဟု ကြံဆယူခြင်းဟူသော အကြောင်းဖြင့်လည်း ဤအကြံအတိုင်း ဟုတ်ပြီဟု အတည်မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) ကြံဆ၍ယူခြင်းဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything by mere supposition. Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) nor by mere logic. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by logical reasoning. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၆) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော ဆဌမအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ နယဟေတု။
အဋ္ဌကထာ။ ။ “မာ နယဟေတူ” တိ နယဂ္ဂါဟေန ပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ “အညော ဣမာယ ယုတ္တိယာ ဘူတမိဒ” န္တိ ကေ၀လံ အနုမာနတော နယဂ္ဂါဟေန ဂဏှာတိ၊ တံ ပဋိက္ခိပန္တော ‘မာ နယဟေတူ’တိ အာဟ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ “မာ နယဟေတူ” တိ - မာ နယဟေတု- ဟူသည်ကား၊ နယဂ္ဂါဟေန ပိ - နည်းကိုယူခြင်း မျှဖြင့်လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ အညော - တစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ဣဒံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ ဣမာယ ယုတ္တိယာ - ဤအကြောင်းယုတ္တိဖြင့်၊ ဘူတံ - ဟုတ်မှန်၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ ကေ၀လံ - တက္ကဟေတု, အာကာရပရိဝိတက္ကတို့နှင့် မရောမယှက်သက်သက်၊ အနုမာနတော့ - မှန်းဆသောအားဖြင့်၊ နယဂ္ဂါဟေန - နည်းကိုယူခြင်းဖြင့်၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တံ - ထိုသို့သောယူခြင်းကို၊ ပဋိက္ခိပန္တော - ပယ်မြစ်တော်မူလိုသော ၀ါ- ပယ်မြစ်တော်မူလိုသည်၏အဖြစ်ကြောင့် ‘မာ နယဟေတူ’ တိ- မာ နယဟေတု-ဟူ၍၊ ဘဂ၀ါ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ အာဟ - မိန့်တော်မူ၏။
(၁) သဘာဝယုတ္တိနည်းဖြင့် ကိုက်ညီပေသည်ဟူ၍ မှန်းဆသောနည်းလမ်းဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) နည်းမှီယူခြင်းမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) အခြားနေရာ (အခြားနိုင်ငံ)တို့၌ သူတစ်ပါးတို့ လုပ်နည်းကိုင်နည်းကို သဘောကျ၍လည်း ဤနေရာ၌ သင့်တော်လှပြီဟု အမြဲအစွဲ ယူမထားကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) နည်းလမ်းယုတ္တိ ချိန်ဆယူခြင်းဟူသော အကြောင်းဖြင့်လည်း ၀ါ- နည်းယူခြင်း၊ နည်းမှီခြင်းဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီဟု အတည်မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) နည်းကို ယူသဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything by mere inference. Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) or inference. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by inferential reasoning. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၇) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော သတ္တမအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ အာကာရပရိဝိတက္ကေန။
အဋ္ဌကထာ။ ။ “မာ အာကာရပရိဝိတက္ကေနာ”တိ သုန္ဒရမိဒံ ကာရဏန္တိ ဧ၀ံကာရဏပရိဝိတက္ကေနပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ ကဿစိ ‘ဧ၀မေတံ သိယာ’ တိ ပရိကပ္ပေန္တဿ ဧကံ ကာရဏံ ဥပဌာတိ။ သော ‘အတ္ထေတ’ န္တိ အတ္တနော ပရိကပ္ပိတာ ကာရေန ဂဏှာတိ တံ ပဋိသေဓေန္တော ‘မာ အာကာရ ပဋိဝိတက္ကေနာ’ တိ အာဟ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ “မာ အာကာရပရိဝိတက္ကေနာ”တိ - မာ အာကာရပရိဝိတက္ကေနဟူသည်ကား၊ ဣဒံ ကာရဏံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ သုန္ဒရံ - ကောင်း၏။ ဣတိ ဧ၀ံ - ဤသို့၊ ကာရဏပရိဝိတက္ကေနပိ - ခိုင်လုံသော အကြောင်းအရာကို ကြံစည်ခြင်းမျှဖြင့်လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ ကဿစိ - တစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ဧတံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ ဧ၀ံ - ဤသို့၊ သိယာ - ဖြစ်ရာ၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ ပရိကပ္ပေန္တဿ - ကြံစည်သည်ရှိသော်၊ ၀ါ- ကြံစည်စဉ်၊ ဧကံ ကာရဏံ - တစ်ခုသောအကြောင်းအရာသည်၊ ဥပဌာတိ - ထင်၏။
တစ်နည်း။ ဧတံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ ဧ၀ံ - ဤသို့၊ သိယာ - ဖြစ်ရာ၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ ပရိကပ္ပေန္တဿ- ကြံစည်သော၊ ကဿစိ - တစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ဧကံ ကာရဏံ - တစ်ခုသောအကြောင်းအရာသည်၊ ဥပဌာတိ - ထင်၏။ သော - ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ဧတံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ အတ္ထိ - ရှိ၏။ ဣတိ - ဤသို့၊ အတ္တနော - မိမိ၏။ ပရိကပ္ပိတာ ကာရေန - ကြံစည်အပ်သောအခြင်းအရာအားဖြင့်၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တံ - ထိုသို့သောယူခြင်းကို၊ ပဋိသေဓေန္တော - တားမြစ်တော်မူလိုသော၊ ၀ါ- တားမြစ်တော်မူလိုသည်၏အဖြစ်ကြောင့်၊ ‘မာ အကာရ ပရိဝိတက္ကေနာ’တိ - ‘မာ အကာရ ပရိဝိတက္ကေနဟူ၍၊ ဘဂ၀ါ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ အာဟ - မိန့်တော်မူ၏။
(၁) ကြံစည်အပ်သောအခြင်းအရာ၏ ခိုင်လုံသော အကြောင်းအထောက်အထား ရှိရုံမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) အခြင်းအရာကို ကြံစည်သောအားဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃)တစ်စုံတစ်ခု ပြုဖို့ရန် အကြောင်းအထောက်အထားကို စဉ်းစားရာဝယ် အထောက်အထားကောင်းကိုရ၍ သဘောကျသဖြင့်လည်း အမြဲအစွဲမယူကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) အကြောင်းကို ကြံဆခြင်းဖြင့်လည်း ၀ါ- မိမိကြံစည်အပ်သော အကြောင်းဖြင့်လည်း အကြောင်း ခိုင်လုံသည်ဟူ၍ အတည်မယူကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) အခြင်းအရာကို ကြံသောအားဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything by merely considering the reason. Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) nor by considering appearances. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by reflection on reasons. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၈) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော အဋ္ဌမအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခ န္တိယာ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ “မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခ န္တိယာ” တိ အမှာကံ နိဇ္ဈာယိတွာ ခမိတွာ ဂဟိတဒိဋ္ဌိယာ သဒ္ဓိံသမေတီတိ ပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ အပရဿ စိန္တာယတော ယထာပရိကပ္ပိတံ ကဉ္စိ အတ္ထံ ‘ဧ၀မေတံ န အညထာ’တိ အဘိနိဝိသန္တဿ ဧကာဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ယာ ယဿ တံ ကာရဏံ နိဇ္ဈာယန္တဿ ပစ္စက္ခံဝိယ နိရူပေတွာ စိန္တေန္တဿ ခမတိ၊ သော ‘အတ္ထေတ’ န္တိ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခန္တိယာ ဂဏှာတိ၊ တံ သန္ဓာယာတိ ‘မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခန္တိယာ’တိ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ “မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခ န္တိယာ” တိ- မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခ န္တိယ- ဟူသည်ကား၊ အမှာကံ - ငါတို့၏။ ၀ါ- ငါတို့သည်၊ နိဇ္ဈာယိတွာ - ရှု့ကြည့်၍၊ ၀ါ- ကြံစည်၍၊ ခမိတွာ - နှစ်သက်၍၊ ဂဟိတဒိဋ္ဌိယာ - ယူအပ်သောအယူနှင့်၊ သဒ္ဓိံ- အတူတကွ၊ သမေတိ - ညီညွတ်ပေ၏။ ဣတိပိ - ဤသို့လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
ဋီကာ။ ။ အပရဿ - တစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ၀ါ- တစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ စိန္တာယတော - ကြံစည်သည်ရှိသော်၊ ၀ါ- ကြံစည်စဉ်၊ ယထာ ပရိကပ္ပိတံ - အကြင်အကြင် ကြံစည်ထားတိုင်းသော၊ ကဉ္စိ - တစ်စုံတစ်ခုသော၊ အတ္ထံ - အနက်သည်၊ ဧတံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ ဧ၀ံသိယာ - ဤသို့ဖြစ်ရာ၏။ အညထာ - တစ်ပါးသောအခြင်းအရာအားဖြင့်၊ နသိယာ - မဖြစ်ရာ။ ဣတိ - ဤသို့၊ အဘိနိဝိသန္တဿ - နှလုံးသွင်းစဉ်၊ ဧကာ - တစ်ခုသော၊ ဒိဋ္ဌိ - အယူသည်၊ ဥပ္ပဇ္ဖတိ- ဖြစ်၏။ ယဿ ပုဂ္ဂလဿ - အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ယာ ဒိဋ္ဌိ - အကြင်အယူကို၊ တံ ကာရဏံ - ထိုအကြောင်းကို၊ နိဇ္ဈာယန္တဿ - ကြည့်ရှု့သည်ရှိသော်၊ ၀ါ- ကြံစည်သည်ရှိသော်၊ ပစ္စက္ခံဝိယ - မျက်မှောက်ကဲ့သို့၊ နိရူပေတွာ - တင်၍၊ စိန္တေန္တဿ - ကြံစည်စဉ်၊ ခမတိ - ကြိုက်နှစ်သက်အပ်၏။ သော ပုဂ္ဂလော - ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ဧတံ - ဤအကြောင်းအရာသည်၊ အတ္ထိ -ရှိ၏။ ဣတိ -ဤသို့၊ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခန္တိယာ - မိမိ၏အယူနှင့်တူမျှသည်ကို ကြည့်ရှု့နှစ်သက်ခြင်းဖြင့်၊ ဂဏှာတိ - ယူ၏။ တံ - ထိုသို့သော ယူခြင်းကို၊ သန္ဓာယ- ရည်ရွယ်၍၊ ‘မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခန္တိယာ’တိ ၀စနံ - မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္ဈာနက္ခန္တိယ-ဟူသော စကားကို၊ ဘဂ၀ါ - မြတ်စွာဘုရားသည်၊ အာဟ - မိန့်တော်မူ၏။
(၁) ငါတို့ ကြံစည်နှစ်သက်၍ ယူထားသောအယူနှင့် တူညီပေသည်ဟူ၍လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) ငါတို့ကြံစည်နှစ်သက်၍ ယူထားသောအယူနှင့် တူညီပေသည်ဟူ၍လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) သူပြောအပ်သောအယူဝါဒသည် ငါတို့ စဉ်းစားကြေနပ်ထားသောအယူနှင့် ညီမျှပေသည်ဟု အယူဝါဒချင်းတူမျှယုံမျှဖြင့်လည်း အမြဲအစွဲ မယူကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) တွေးကြံစဉ်းစား၍ ကြေနပ်နှစ်သက်လက်ခံထားအပ်သော မိမိအယူအဆဖြင့်လည်း၊ ၀ါ- တွေးကြံစဉ်းစား၍ ကြေနပ်နှစ်သက် လက်ခံထားအပ်သော မိမိအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသဖြင့်လည်း အတည်မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) ကြံစည်၍ နှစ်သက်၍ ယူအပ်သောအယူဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything merely because it agrees with your pre-conceived notions. Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) nor by the delight in speculative opinions. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by the acceptance ofaview after pondering. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၉) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော န၀မအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ ဘဗ္ဗရူပတာယ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ဘဗ္ဗရူပတာယာတိ အယံဘိက္ခု ဘဗ္ဗရူပေါ၊ ဣမဿ ကထံ ဂဟေတုံ ယုတ္တန္တိပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
ဋီကာ။ ။ ဖွင့်ဆိုချက်မရှိ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ ဘဗ္ဗရူပတာယာတိ - မာ ဘဗ္ဗရူပတာယ ဟူသည်ကား၊ အယံဘိက္ခု - ဤရဟန်းသည်၊ ဘဗ္ဗရူပေါ- ယုံကြည်ထိုက်သော
ပုဂ္ဂိုလ်တည်း၊ ဣမဿ - ဤပုဂ္ဂိုလ်၏၊ ကထံ - စကားကို၊ ဂဟေတုံ - ယူခြင်းငှါ၊ ယုတ္တံ - သင့်မြတ်၏။ ဣတိပိ - ဤသို့လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
(၁) အများယုံကြည်လေးစားထိုက်သော သဘောရှိသော ရဟန်း၏စကားမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) မှတ်ယူထိုက်သော သဘောမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃) ဤရသေ့ရဟန်းကား ယုံကြည်ထိုက်သော အထက်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တည်း။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်၏စကားကို လေးလေးစားစား မှတ်သားထိုက်သည်ဟုလည်း စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ယူမထားကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄) စကားကို နာယူထိုက်သော သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်၏အဖြစ်အားဖြင့်လည်း ဤပုဂ္ဂိုလ်ပြောစကား မမှားဧကန်မှန်၏ဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) ထိုက်သောရဟန်း၏အဖြစ်ဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything merely because it seems acceptable. – (i.e. thinking that as the speaker seems to beagood person his worlds should be accepted.) Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) nor by seeming possibilities. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) by the seeming competence ofaspeaker, or because you think. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
(၁၀) ကာလာမသုတ်တော်လာ ချက်ချင်းလက်ခံအတည်မပြုသင့်သော ဒသမအချက်
ပါဠိ။ ။ မာ သမဏော နော ဂရူတိ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ သမဏော နော ဂရူတိ အယံ သမဏော အမှာကံ ဂရု၊ ဣမဿ ကထံ ဂဟေတုံ ယုတ္တန္တိပိ မာ ဂဏှိတ္ထ။
အဋ္ဌကထာ။ ။ မာ သမဏော နော ဂရူတိ- မာ သမဏော နော ဂရု-ဟူသည်ကား၊ အယံ သမဏော - ဤရဟန်းသည်၊ အမှာကံ - ငါတို့၏။ ဂရု - အလေးအမြတ် ပြုအပ်သူတည်း။ ဣမဿ - ဤရဟန်း၏၊ ကထံ - စကားကို၊ ဂဟေတုံ - ယူခြင်းငှါ၊ ယုတ္တံ -သင့်မြတ်၏။ ဣတိပိ - ဤသို့လည်း၊ မာ ဂဏှိတ္ထ - ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။
(၁) ငါတို့လေးစားသော ရဟန်း၏စကားဟူ၍လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု အတည်မယူကုန်လင့်။ ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တ
(၂) ငါတို့လေးစားသော ရဟန်း၏စကားဟူ၍လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။ (ပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာအုပ် -၂၀၇)
(၃)ဤရသေ့ရဟန်းကား ငါတို့ကိုးကွယ်အပ်သော ဆရာဖြစ်၏။ ငါ့ဆရာစကားကို ငါမှတ်သားသင့်သည်ဟုလည်း စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ယူမထားကြနှင့်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အနာဂတ်သာသနာရေး - ၃၅၂)
(၄)ငါတို့၏ဆရာဖြစ်သော ရဟန်းပေတည်း။ ဤသို့ အားကိုးတစ်ခု အခိုင်အမာပြု၍လည်း အတည်မယူကုန်လင့်။ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်နိဿယ - ၄၄၁)
(၅) ရဟန်းသည် ငါတို့၏ဆရာတည်း၊ ဤသို့ နှလုံးပိုက်သဖြင့် မယူကြကုန်လင့်။ အရှင်ဇာဂရ (အင်္ဂုတ္ထိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ (မိုးထိမူ) - ၅၄၇ )
(၆) Do not accept anything thinking that the ascetic is respected by us. – (i.e. therefore it is right to accept his word.) Ven. Narada Maha Thera (Buddhism inanutshell -22)
(၇) nor by the idea; “this is our teacher”. D.R Walpola Ra Hu La (What the Buddha taught –2)
(၈) the ascetic is our teacher. Nyanaponika Thera (Numerical discourses of the Buddha - 64)
****** မစွဲလမ်းရာ ဆယ်ဌာန ******
ကလေးဘ၀၊ စ၍မှလျင်၊ ကြာရဖန်ဖန်၊ ပရံပရ၊ မိဘဘိုးဘွား၊ ဆက်ဆက်အား၊ မှတ်သားခဲ့ဘိ၊ ပြုရိုးရှိ၏။
ဣတိကိရ၊ ကြားလူကပြော၊ ကျမ်းသဘောနှင့်၊ နှီးနှောညှိပြန်၊ အကြံသက်သက်၊ ကြံစည်ချက်တည်း။
တစ်နည်းမှန်းဆ၊ နည်းလမ်းရယူ၊ တစ်မူအကြောင်း၊ ကြံကောင်းကြံရ၊ ကိုယ့်ယူဆကို၊ အားရနှစ်သက်၊ ညီညွတ်ချက်ပါ၊ ရဟန်းမှာမူ၊ ပြောရာမှန်ကန်၊ ဖြစ်သင့်တန်၏။
တစ်ဖန်သူဟာ၊ ဒို့ဆရာဟု၊ ဆယ်ဖြာကြောင်းစု၊ တစ်ခုခုကြောင့်၊ ယူမှုတိမ်းစောင်း၊ မှားတတ်ကောင်းသည်၊ အပေါင်းစဉ်းစားကြစေသောဝ်။
အနာဂတ်သာသနာ - ၃၅၄
****** ဘာသာအယူဝါဒစစ်တမ်း ******
ဘာသာဝါဒ၊ မတူကြ၍၊ လောကအတွင်း၊ ငြင်းခုံခြင်းဖြင့်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ရောက်ကုန်ကြ၏။
၀ါဒအယူ၊ မှားခဲ့မူကား၊ ဆူဆူဗုဒ္ဓ၊ ကယ်မရသည့်၊ လေးဝပါယ်ဘုံ၊ ဘေးတွေ့ ကြုံလိမ့်။
တစ်ဆင့်ကြားသိ၊ မိရိုးဖလာ၊ ကောလာဟလ၊ ကျမ်းစာမျှနှင့်၊ ကြံဆ - နည်းမှီ၊ ဆီလျော်သုံးသပ်၊ ယူချင်းထပ်၍၊ ယုံအပ်သူပဲ၊ ဆရာစွဲဖြင့်၊ လွှဲပုံစိတ်ချ၊ မယူကြလင့်။
ဒိဋ္ဌကျင့်ကြံ၊ ကိုယ်ပိုင်ညဏ်ဖြင့်၊ မှားမှန်ကောင်းဆိုး၊ သိအောင်ကြိုးဟု၊ မျိုးကာလာမ၊ ဟောညွန်ပြ၊ ၀ါဒအယူ၊ စစ်တမ်းပေ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, July 05, 2010